Migadona Ao Taiwan Ny Big Issue · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2018 17:44 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, বাংলা, Português, English
Andriamatoa Jia, mivarotra ny laharana voalohany amin'ny The Big Issue Taiwan Edition (natonta ao Taiwan).Sary navoakan'i AmberTaipei
The Big Issue, izay navoaka voalohany tao Angletera 20 taona lasa izay, dia nanonta ny gazetibokiny mpivoaka isam-bolana ho amin'ny teny nentim-paharazana Shinoa ao Taiwan tamin'ny voalohan'ny volana Aprily. Tetikasam-panontàna tsy manam-paharoa izay miantefa amin'ny olona tsy manan-kialofana hivarotra ny gazetiboky an-dalambe ary hanampy azy ireo hanana asa ara-dalàna. Ireo tsy manan-kialofana dia afaka ny hahazo 50 TWD (eo amin'ny antsasaky ny vidiny eo ho eo) ho an'ny gazety tsirairay lafony. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba ny fiandohan'izy io sy ny fandrosoany ao amin'ny Wikipedia.
Taiwan no firenena faha-9 mamoaka Ny Big Issue. I Li Chi Zhong(李取中), ilay mpanorina ny Roodo Blog, no manolotra ity modely ity ao Taïwan amin'ny fanantenana fa hiteraka karazàna asa sosialy vaovao izany. Iray volana talohan'ny namoahana ilay gazetiboky voalohany, bigissue.tw no nanokatra ny pejy Facebook natokana ho an'ny mpankafy azy mba handraisana ireo izay vonona hirotsaka an-tsitrapo. Efa mahatratra 27.000 ireo mpankafy azy hatreto. Bilaogera Taiwaney maro no asaina hanoratra ao amin'ity laharana voalohany ity, anisan'izany i Kenworker, izay bilaogera malaza, ary i soundfury, mpanoratra manana ny lazany no sady mpitsikera mozika.
Lin You Xue dia faly tokoa noho ny fahatongavan'ny The Big Issue ao Taiwana :
Vaovao mahafaly ho ahy ny fahatongavan'ny The Big Issue ao Taiwan. Mahagaga ahy fa tsy mijanona fotsiny eo amin'ny fandinihana i Taiwan, fa koa mampihatra ny metodolojian'ny fampiroboroboana ara-tsosialin'ny Britanika ihany koa. Efa nivoaka tao Angletera efa ho 20 taona mahery izao io gazetiboky natokana ho amidin'ny tsy manan-kialofana io. Ankoatra ny resaka fototra ao, mamatsy hevitra hahafahan'ny olom-pirenena manampy ny sahirana ihany koa izy. Kanefa tsy mitovy amin'ny fanomezana, fa mampandray andraikitra ireo sahirana sy mampahaleo tena azy ireo koa
siligraphy19 nilaza hoe:
…Iangaviana ianao hampahafantatra ny olon-drehetra ity gazetiboky ity, na avereno zaraina fotsiny ity lahatsoratro ity. Raha mahita olona tsy manan-kialofana na mpirotsaka an-tsitrapo manao fitafiana The Big Issue manodidina ny toeram-piantsonan'ny MRT ianao, azafady mba mijanonà ary mividianà gazetiboky amin'ny vidiny 100 TWD hampisehoana ny fanohananao mivantana ny raharaha ara-sosialy. Ahenao ny fisotronao Starbucks ary ampirimo ny vola ho an'ny hafaliana mamaky sy manampy ireo tsy manan-kialofana ary ireo sahirana. Amin'ny alalan'ny fivarotana gazety, afaka mahazo fidiram-bola izy ireo, manangana indray ny fahatokisan-tenany ary mahazo ny fahaleovantenany.
I Purple Beans(紫豆子) moa dia naka sary raha iny nahita mpilatsaka an-tsitrapo nivarotra ny Big Issue tany akaikin'ny fiantsonana MRT tao Gongguan iny. Na dia sahala amin'ny tetikasa mahavelom-panantenana aza ilay izy, nizara resaka iray nifanaovany tamin‘Andriamatoa Jia, izay isan'ireo tsy manan-kialofana mpivarotra i Ambertaipei tao amin'ny Twitter :
“Mba Ampio aho hananako fivelomana!” Nitaraina Andriamatoa Jia. Ny maraina izaho ilay niala ny fiantsonana MRT iny no nahitàko azy, tsy nisy nijanonana na nijery azy akory na dia mafy aza ny antsoantsony. Nanambara Andriamatoa Jia fa izaho no mpanjifany voalohany androany.http://twitgoo.com/mn587
Nilaza Andriamatoa Jia fa : “Tsy fantatr'izy ireo akory ny zavatra antsoantsoiko.” Nirotsaka be ny orana tany ivelan'ny toeram-piantsonana ka tsy afaka nijoro teo anoloan'ilay tohatra mandeha hoazy ambany tafo aho, ary dia tsy nitsahatra niantsoantso aho hoe “The Big Issue” tany ivelan'ny gara. Na izany aza, inona ny “The Big Issue” anefa ? Inona no ao anatin'ny The Big Issue? Ho an'ireo be palitao izay tsy liana afatsy ny vohikalanà lavanty anaty aterineto, tsy mamaky afatsy ny Apple Daily sy ny GQ isan'andro, tsy misy iraharahiany izay lehilahy lehibe miantsoantso sy mivarotra gazety tsy dia fantadaza loatra any ivelan'ny fiantsonan'ny MRT any.
antibadmedia koa dia manahy ny amin'ny hoavy sarotry ny The Big Issue ao Taiwan :
Roa andro sisa dia hivoaka ny laharana voalohany amin'ilay gazetiboky. Manana tanjona tsara izy, saingy nilaza ny filazambaovao fa hamidy any amin'ny trano fivarotana tsotra ilay gazetiboky, ivelan'ny tanànan'i Taipei sy ny faritanin'i Taipei koa ……. Raha tsy ratsy ny zavatra resahina ao anatin'io gazetiboky io, ary raha tena mampihatra ilay fitsipika marina hoe “olona tsy manan-kialofana no mivarotra azy”, dia hanao izay rehetra azontsika hatao isika hanohanana azy! Tsy vita vetivety ny hametraka ny rariny sy hitsiny ara-tsosialy amin'ny ankapobeny, fa mbola azo atao ny fanarenana tsikelikely ny ara-bola. Andraso ary jereo
17 ora izayShina